Ma ogtahay in Sweden ay bixiso mushaarka ugu fiican Yurub? | Somaliska
Macluumaad ay soo aruurisay Hay’ad Jermal ah ayaa lagu soo bandhigay in wadanka Sweden uu bixiyo mushaarka saacad laha ugu badan qaarada Yurub. Shirkadaha Sweden ayaa saacadii bixiya isku celcelis €43/saacdii. halka isku celcelis qaarada oo dhan uu yahay €23,70/saacadii.
Ururka Shirkadaha Sweden (Svenskt Näringsliv) ayaa arintaan ku tilmaamay mid dhibaato ah maadaama ay wadanka ka jidho shaqo la’aan. Mushaarka saacadlaha ee sareeya ayaa keenaya in shirkadahu ay ka fogaadaan shaqaalaysiinta dadka xirfadooda hoosayso.
Susanne Spector oo ah Dhaqaaleyahan ka tirsan Svenskt Näringsliv ayaa sheegtay in aysan filayn isbadalo lagu sameeyo mushaarka maadaama aysan siyaasiyiintu doonayn xitaa in ay ka hadlaan hoos u dhigida mushaarka, iyagoo dhinaca kale maalinkasta afka ku haya shaqo abuuris iyo la dagaalnka shaqo la’aanta.
Wadamada kale ee ku soo xiga Sweden ayaa waxaa ka mid ah Belgium (€41.2) Denmark (€39.80), Luxembourg, iyo France. Wadanka Bulgaria ayaa laga bixiyaa mushaarka ugu hooseeya qaarada Yurub oo ah €3.70/saacadii oo keliya.